Psoriasis အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစား၏အသားအရေ grayish-အဖြူရောင်အရိပ်ပေါ်အနာစိမ်းများသဏ္ဌာန်အားဖြင့်လိုက်ပါသွားတဲ့နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ psoriasis အဘို့နံ့သာဆီရောဂါ၏ပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်လူနာရဲ့အခွအေနေသက်သာစေနိုင်ကြောင်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အေးဂျင့်များ၏ရွေးချယ်မှုရောဂါ၎င်း၏ပြင်းထန်မှုနှင့်လူနာများ၏ဇီဝကမ္မလက္ခဏာများ၏ဒီဂရီပေါ်တွင်မူတည်သည်။
psoriasis ကုသမှုဟော်မုန်းဆီမှာတော့ထိုကဲ့သို့သောရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းအဖြစ်လက္ခဏာတွေဖယ်ရှားရေးတို့အတွက်စီးဆင်းမှု၏ပြင်းထန်စူးရှသောပုံစံများကို၏အမှု၌ထုတ်ဆောင်သွားကြ၏။ မူးယစ်ဆေးများအသုံးပြုမှုတစ်ပါတ်ထက်ပိုမိုကြာရှည်မဖြစ်သင့်, ဆေးထိုးတဖြည်းဖြည်းလျော့ချဖြစ်သင့်သည်။ နံ့သာဆီကုသမှု၏ရပ်စဲမှာရောဂါပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သည့်ရှိနေသော်ငြားလည်း, စွဲလမ်းကြသည်။
Akriderm, Diprospan, Beloderm antipruritic နဲ့ anti-inflammatory အကျိုးသက်ရောက်မှု, prepyatsviya ဆဲလ်ပြန့်ပွားရှိသည်။
based hydrocortisone ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ - Latikort, Korteyd antiallergic အကျိုးသက်ရောက်မှုအားအပိုင်များနှင့်တစ်ရှူးတိုးတက်မှုနှုန်းတားဆီး။
Sinaflana နှင့် Lorinden flutsinar antiexudative, antiphlogistic အရေးယူဝင်စား။
Kenalog, ftorokort, Triakort, triamcinolone ဖြစ်သော၏တက်ကြွသောပစ္စည်းဥစ္စာ, ရောင်ရမ်းသက်သာရာနှင့်ယားယံခြင်းပပျောက်။
ဤရွေ့ကားကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများသီးခြားစီသို့မဟုတ်ဟော်မုန်းဆီနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်အသတ်မရှိသုံးနိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့အဓိကအားသာချက် - ကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏နိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ်။ psoriasis များအတွက်အထိရောက်ဆုံးဆီမှေးနေသောခေါင်းစဉ်:
Tsitopsor, Magnipsor အခြေစိုက်အမဲဆီ, ရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချအရေပြားပိုးသတ်ဆေးကြောင့်နူးညံ့ပြော့ပျောင်း။
ဇင့်ဆီမှေးမွှား, Anti-ခြောက်သွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်, ရောဂါကူးစက်မှု၏ထိုးဖောက်မှုကာကွယ်ပေးသည်။
salicylic နံ့သာဆီ , exfoliation တိုးတက်ကောင်းမွန်ကြမ်းတမ်းအသားအရေ softens, အနာရောဂါငြိမ်းစရာကိုအားပေးအားမြှောက်။
, Akrustal, Antipsoriaz, Kartalin ဟာအရေပြားအပေါ်ယံ၏ဆဲလ်အတွင်းရှိဇီဝြဖစ်ထိန်းညှိသူတို့ကို softens နှင့်ယားယံခြင်းသက်သာရာ - ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကသဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများကနေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ပထမဦးဆုံးအ nonhormonal ကုသမှုဆီမွှေးကိုမှာအရေပြားဟာပျက်စီးယိုယွင်းသွားစေနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့သာတက်ကြွစွာအစိတ်အပိုင်းများ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု၏အစကိုပြသထားတယ်။ ဒါကြောင့်မကြာခဏအခြေအနေကိုကုသမှုရပ်တန့်ဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဖြစ်သောကြောင့်မယူမီသင်, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုများရရှိနိုင်မှုစစ်ဆေးရမည်။
အထိရောက်ဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးကိုတွေ့ရှိရပါသည်အတွက်သွေးဖြူဆဲလ်၏လှုပ်ရှားမှုကိုတားဆီးထားတဲ့ hydrocortisone အပေါ်အခြေခံထားတယ်။ နှစ်နှစ်အဟောင်းနှင့်သူတို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအတွက် contraindicated ကြသည်မဟုတ် မှစ. ကလေးငယ်များ assign ။ နံ့သာဆီဖျက်ဆီးခြင်း၏ဧရိယာလျှော့ချရန်နှင့်ဆဲလ်များကြီးထွားမှုကိုနှေးကွေးစေနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး:
တော်တော်ခိုင်မာတဲ့ဆေးတစ်လက် triamcinolone ဆီမှေးဖြစ်ပါသည်, အရာကျယ်ပြန့်သည်ပျက်စီးခြင်းမှလျှောက်ထားသည်။ ကုသမှုတစ်ခုသာတိုတောင်းသောအချိန်များအတွက် exacerbations စဉ်အတွင်းထွက်သယ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများအရေပြားကျုံ့ပါဝင်သည်။ ကုသမှုသာဆေးဘက်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပါမည်။
အင်အားအကောင်းဆုံးဆီမှေးအခြားဆေးဝါးများအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်သည့်အခါထွက်သယ်ဆောင်သောကုသမှု clobetasol ၏အခြေခံပေါ်မှာ Kloveyt နံ့သာဆီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအဖြစ်တစ်ဦးကူးစက်ရောဂါရှိသည်သောပုဂ္ဂိုလ်များအဘို့အ contraindicated ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာထက်ပိုဆယ်ရက်အတွင်းယူတားမြစ်ထားသည်။ အဓိကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနေသောခေါင်းစဉ်:
မျက်စိထဲမှာပြင်းစွာတိုက်ရေယာဉ် - အကြောင်းရင်းများ
သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း - စနစ်တစ်ခု
လက်စထရော - 50 နှစ်ကြာအမျိုးသမီးတွေအတွက်စံ
Cefixime - Analogues
Vigamoks - မျက်စိပေါက်
အစာအိမ်နဲ့ - လက္ခဏာများ, ကုသ
Alflutop - ထိုးဆေး
ရေကူးဝတ်စုံ 2016 - အဝလွန်မှုအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း
ရွှံ့စေးကနေ Transformer အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒါဟာပန်ကရိယနှိပ်စက်တာ - ယူထားတဲ့ဆေးဝါး?
လေဖြတ်ခြင်း - ရောဂါလက္ခဏာစောစောဆိုင်းဘုတ်များ
"ဒီအားဖြင့်ကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့သည်အမြိုးသမီးမြား 'ကို 100 ရိုးသားဓာတ်ပုံများ
ကာကွယ်ဆေးထိုး ADSM လူကြီးများ
ကရင် Blixen ပြတိုက်
Organza ၏ Topiary - မာစတာအတန်းအစား
သားအိမ် cyst: အကြောင်းရင်းများ
Turn-Down ကော်လာ - ကအဘယ်အရာကို၎င်း၏အမျိုးအစားများ, စတိုင်ပုံရိပ်တွေဖန်တီးဖို့ဘယ်လို?